Họtelu ndi di na Onitsha, Anambra - Tinye akwụkwọ ugbu a, Kwuọ ụgwọ ma emesi a!
Onitsha bu obodo azụmahịa na ekwo ekwo na ihe omume azumahia, ndị bi na Onitsha bụ ndi Igbo sitere n'ebe ndịda ọwụwa anyanwụ nke Nigeria, ha kariri otu nde na onu ogugu, obodo ndị ọzọ gbara Onitsha gburugburu bụ -Uboma, Agu, Amabunze, Enugu-Ekike, Olona, Ukwani, Ngwa na Nkweno na ọtụtụ obodo nta ndị ọzọ.
N'oge ndi gara aga, amara ya nke oma maka ọdụ ụgbọ mmiri amuahia nke ndi ulo oru azumahia Royal Niger, mmanụ nkwu na nkpuru akuku ihe ubi bu nke nwetara oga na ihu mgbe ụbọchị itu mgbere ahia ohu na igba ohu gasiri na afo ndi 1850. Na ubochi taa, Onitsha bụ ebe amama maka ahia ukwu di na ya, otu n'ime ndị nke kasị ukwu na mpaghara obodo ọdịda anyanwụ nke Afrika,
Isi ulo uka okpukperechi nke ndi Roman na CMS (Catholic na Anglican) di cha Onitsha.
Ị kwesịrị ị ga leta ogige ihe akụkọ mere mgbe ochie nke Igbo Ukwu , ebe emere ihe nchoputa mgbe ochie na mmepeanya nke oge ochie , oge mgbe ndị mmadụ na-eji gbam-gbam, ọla mgba na aka na nke ihe olu, na ihe ígwè tupu ndi madu bi na ya ugbu a, ọ bụ ogige na-akpali mmasi mmadu.
Họtelu , Ulo Azụmahịa na ebe njegasi
Họtelu ndi di na Onitsha bụ nke di nma nke ukwu ma di kwa ọnụ ala, Dolly Hills Họtelu nke di na etiti Trans Nsiki nwere ihe ozi na ngwangwa eji ebi ndu ọkaibe eji enyere ndụ aka, Ga gwuo mmiri na odo mmiri ha di ukwu na oge -ekpo ọkụ nke oge ikuku ehihie. I ga enweta onunu na nlekota di nma nke ndi oru ha nwere obi umeala na onu ego di ala nke puku naira asaa na ebe odi onu ala maka onuno nke otu abali na họtelu.
Ị puru ị newta ezi nri esiri nkeoma bu ndi dị ka nri asuruasu ji na ofe oha, weere ofe akwukwo nri nke obodo na Nigeria gwakota na nri nke ndi mba ofesi na ụlọ oriri na ọṅụṅụ dị ka na ụlọ oriri na ọṅụṅụ eji kpakpando ise mara na onu ego nari naira, ị ga-enwe nri uto nke ga eme ka ị na -abịa mgbe dum.
Basino Họtelu nke Onitsha bụ ebe nwere nchekwa ga ahu maka ezumike gi na odi nma gị mgbe ị na ano n'ebe ahụ,
Ogugo onu ahia maka onu ụlọ ha sitere na puku naria ise, ha nwere ọkụ eletrik nke n’adi abali na ubochi nile na ihe ikuku m’nweta ozi nke igwe komputa a na akpo ( internet na okwu beeke), ulo ebe ọṅụṅụ mmanya ha bu nke akwajuru na mmanya ọṅụṅụ ndi di iche iche nke nhoro gi. O nwere igwe ikuku ntụ oyi di nma ma dikwa nso na obodo ndi mepere-emepe. Ọ bụrụ na ị no na Onitsha maka itumgbere azụmahịa, njem nleta ma ọ bụ itụrụndụ mmanu, Isi ahịa Onitsha bụ ebe dị mma ịzụta ihe ọ bụla I choro, malite na uwe, ngwangwaa ugboala, ihe ndi eji aru ụlọ, akpụkpọ ụkwụ na ọtụtụ ihe ndị ọzọ, i nwere ike iji ugboala bọs nke ọnụ ego ya bu site na iri naira ise rue na otu narị naira na naira iri ise ma ọ bụ ga ewere ugboala tagzi obere nke di oké ọnụ nke nta site na narị naira asaa gbagowe elu.
Họtelu GRA Phase 1 Họtelu Fegge Họtelu Woliwo Họtelu Harbour Industrial Layout Họtelu Awka Họtelu Nnewi
Họtelu Idemili Họtelu Ihiala Họtelu Njikoka